HTC U12 ၏ထင်မြင်ချက်ဒီဇိုင်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည် Androidsis
HTC U12 ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုခြင်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
အက်ဒါဖာရီနို | | HTC က, NOTICIAS
HTC သည်၎င်း၏ high-end အသစ်ကိုမကြာမီတွင်ပြသမည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး HTC U12 က ဦး ဆောင်နေသည်။။ ထို့အပြင်မီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင်မှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ယခုနှစ်တွင်ရောင်းချမည့် High-end တွင်တစ်ခုတည်းသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏လူကြိုက်များမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသော်လည်း၎င်း၏ high-end အကွာအဝေးကိုအမြဲအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖုန်းများကိုမျှော်လင့်နေပါသည် ကျနော်တို့ပြီးသားအချို့ပြန်ဆိုရှိသည်.
HTC U12 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထိုင် ၀ မ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းမှကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းသောအတွေးအခေါ်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ high-end အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဆင်သင့်?
HTC U12 သည် ၂၀၁၈ အတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်သောစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်သံသယမရှိဘဲအလွန်ကြီးစွာသောတာဝန်။ ဒီဇိုင်းအတွက်ကတော့၊ ဒီပုံတွေမှာဖုန်းကဘာတွေကမ်းလှမ်းမလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်, ပုံမှန်အတိုင်း, တစ် ဦး groundbreaking သို့မဟုတ်လွန်းဝတ္ထုဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်မထားပါဘူး ဒီကိစ္စမှာ။
ဒီဗားရှင်းမှာအနက်ရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဂန္တ ၀ င်ဒီဇိုင်းကတော့အံ့အားသင့်စရာများစွာမရှိပါဘူး။ အသုံးပြုသူများစွာအတွက်သတိထားမိစရာမလိုသည့်အပြင်ပျော်ရွှင်မှုလည်းရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းမှာ notch ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များကစျေးကွက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဤ HTC U12 သည်ဤဖက်ရှင်သို့မကျပါ။
ကိရိယာ၏နောက်ကျောတွင် အလျားလိုက်နှစ်ဆကင်မရာနှင့်လက်ဗွေဆင်ဆာတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေကြသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကင်မရာများ။ ထို့အပြင်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အံ့သြစရာမြားစှာမရှိ။ Android ပေါ်တွင်မြင့်မားသောအကွာအဝေးအတွင်းအတော်လေးပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။
ယခုအချိန်ထိထုတ်ကုန်၏တင်သည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမထုတ်ဖော်နိုင်သေးပါ။ ယခင်ပေါက်ကြားမှုအရ HTC U12 ကိုမေလတစ်လလုံးတွင်ရောင်းချမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့ကြောင့် high-end ကိုယခုAprilပြီလတွင်တရားဝင်ပြသလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC U12 ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုခြင်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Asus ZenFone5ကိုAprilပြီ ၁၂ ရက်တွင်ထိုင်ဝမ်၌စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Snapchat သည်လူ ၁၆ ဦး အထိဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုနောက်ဆုံး update လုပ်ပြီးနောက်